Ifulethi elithokomele elinamakamelo ama-2
Karlsruhe, Baden-Württemberg, i-Germany
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Mischa
Ifulethi elithokomele futhi linikezwe ngothando amakamelo ama-2 (51sqm). Konke kuyatholakala okudingayo ukuze uhlale kamnandi. Ukuhlala isikhashana noma ngaphezulu. Kungakhathaliseki ukuthi iyimfihlo noma ibhizinisi. Ifulethi linefenisha evumelana nezimo kakhulu. Kunemibhede emi-2 ekamelweni elikhulu. Ikamelo elincane linombhede wokudonsa ngakho-ke libuye lifanele imibhangqwana. I-LCD TV kuwo womabili amakamelo. Ikhishi elihlonyiswe ngomshini wokuwasha izitsha kanye nomshini weNespresso.
Ikamelo ngalinye linombhede, itafula eliseceleni kombhede, ikhabethe lezingubo elinamahange, ideski kanye netafula lokudlela elinezihlalo. I-WiFi iyatholakala. Womabili amakamelo ane-LCD Smart TV (i-Netflix, i-Amazon Prime, njll.) Ilineni lombhede namathawula anikeziwe. Ikhishi elihlonyiswe ngesitofu, ihhavini, ifriji ne-microwave nomshini wokuwasha izitsha. Umshini wekhofi (Nespresso) neketela. Igumbi lokuwasha elinemishini yokuwasha emi-2. Uma kudingeka, umbhede uyatholakala.
Ngokuhlala isikhathi eside, ukuhlanza kwenziwa njalo emavikini ama-2 futhi ilineni lombhede namathawula ashintshiwe.
Izitolo zezidingo zansuku zonke, ababhaki, iRewe, DM kanye ne-Aldi zisebangeni lokuhamba ngezinyawo, kanye nezindawo zokudlela eziningi. Imizuzu embalwa uhamba ngezinyawo ukuya edolobheni elihle elidala laseDurlach. I-5km kuphela ukusuka eTurmberg. Ukusuka lapha unombono omuhle wayo yonke iKarlsruhe nethafa laseRhine.
Hlola ezinye izinketho ezise- Karlsruhe namaphethelo